Village Survival, the Eight2– Variety Myanmar
Watch full episodes Village Survival, the Eight 2, download Village Survival, the Eight2english subbed, Village Survival, the Eight2eng sub, download Village Survival, the Eight2eng sub, stream Village Survival, the Eight2at Variety Myanmar.
Status: Ongoing Network: SBS Released: Feb 15, 2019 - Mar 22, 2019 Duration: 1 hr. 20 min. Season:2Country: South Korea Type: TV Show Episodes:6Posted by: Thomas Nicolas Released on: August 23, 2020 Updated on: September 29, 2020
Watch streaming Village Survival, the Eight2English Subbed on Variety Myanmar. You can also download free Village Survival, the Eight2Eng Sub, don't forget to watch online streaming of various quality 720P 360P 240P 480P according to your connection to save internet quota, Village Survival, the Eight2on Variety Myanmar MP4 MKV hardsub softsub English subbed is already contained in the video.
Village Survival, the Eight (Season – 2) [ Complete ] Zip File
အားလုံး တောင်းဆိုထားတဲ့ Village Survival Season 2
မီခြူရီဆိုတာ ဘယ်လို ရွာလေး လဲဆိုတာ Season1 မှာ သိခဲ့ပြီးကြပါပြီ ။
သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ရွာထဲမှာရှိတဲ့ ​ဒေါ်လာ ၁သောင်းကို သဲလွန်စတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး လိုက်ရှာရမယ် ။
သဲလွန်စတွေရ​ဖို့ ဂိမ်းတွေဆော့ရမယ် ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို SBS ကိုရော မိမိအေဂျင်စီကိုရော ခွဲပေးစရာမလိုပဲ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် မီခြူရီ Season2 ကတော့ Seson1 နဲ့ မတူတော့ပါဘူး ။
ဆော့ရမယ့် ဂိမ်း တွေလည်း ပြောင်းလဲလာသလို ​လျှို့ဝှက်နက်နဲမှုတွေကလည်း များလာပါတယ် ။
Season1 ရဲ့ အငွေ့အသက် နည်းနည်းပဲပါပြီး Season2 ကို ကြည့်ရမှာပါ ။
[ Synopsis 1 &2]
မီခြူရီ Season2 အပိုင်း၁ မှာတော့ အထူးဧည့်သည်တော်အနေနဲ့ Running Man က ဆိုမင်း ကပါဝင်ထားပါတယ် ။
Running Man က လိုပဲ အလွဲလွဲအမှားမှားတွေလုပ်ပြီး ဘယ်လို ဖြစ်နေမလဲဆိုတာတော့ ဆက်ကြည့်ရမှာပါ ။
ပါဝင်တဲ့ သူတွေကတော့ Season1 နဲ့ အတူတူဖြစ်ပေမယ့် Blackpink က Jennie ကတော့ schedule တွေကြောင့် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး ။
အဖွဲ့​ဝင်တွေရဲ့ ပြောစကားတွေကိုကြည့်ပြီး သူတို့တွေ Jennie ကို ဘယ်လောက် လွမ်းနေလဲ ဆိုတာကို သိရမှာပါ ။
[ EP 3&4 Synopsis ]
ဒီတစ်ခေါက် မီခြူရီရွာလေးကို ဧည့်သည်အဖြစ် MOMOLAND က ယွန်ဝူး ပါဝင်လာမှာပါ ။
ဒေါ်လာ ၁သောင်းကို ၁ညအိပ် ၂ရက်အတွင်း အတူတူရှာကြရင်း သဲလွန်စတွေစုဖို့
ပျော်စရာဂိမ်းတွေကို အတူတူ ဆော့ကစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒေါ်လာ၁သောင်း ရှာဖွေဖို့ အထောက်အကူတွေဖြစ်မှာပါ ။
Season2ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမှုတွေနဲ့ ပိုပြီးခက်ခဲလာတဲ့ သဲလွန်စတွေကို
အတူတူဖြေရှင်းကြရမယ့် အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ။
[ Synopsis 5&6 ]
မီခြူရီ Season2 ရဲ့ နောက်ဆုံးအပါတ်ရိုက်ကူးရေးမှာတော့ Apink က
အချောဆုံးကောင်မလေး နာအွန်းက ဧည့်သည် အနေနဲ့ လာရောက်ပါဝင်ပေးမှာပါ ။
သဲလွန်စတွေဖြစ်တဲ့ လမ်းညွှန်မြေပုံ ၊ ဆေးတောင့် ၊ ရထားလက်မှတ် ၊ လက်အတ် ၊ CD ၊ ဖုန်း ၊
စာအိတ် နဲ့ အရုပ်ဆက်တဲ့ပဟေဠိ တို့ကို အသုံးပြုပြီး ဒေါ်လာ၁သောင်းကို ရှာဖွေကြရမှာပါ ။
ယွန်ဝူးရွေးပေးခဲ့တဲ့ ဒေါ်လာ၁သောင်းဖွက်ရမယ့် သူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ?
ပျော်ပျော်ပါးပါး ဂိမ်းတွေဆော့ကစားပြီး သဲလွန်စတွေကို မီခြူရီအဖွဲ့ဝင်တွေက ရှာကြရမှာပါ ။
ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ သဲလွန်စတွေကို ဖြေရှင်းပြီး ဒေါ်လာ၁သောင်းဖွက်တဲ့သူကို
ဘယ်လိုတွေ ခန့်မှန်းကြမယ်ဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
၁နှစ်ကြာမှ ပြန်ရိုက်တဲ့ မီခြူရီ ကို အားလုံး ကြည့်နိုင်ဖို့ ဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
Synopsis : Htike Aung Winn
Translators : Htike Aung Win , Yin Thuzar Htun , Byul , Soe Min Thein
Encoder : Thomas Nicolas ACM
Video Source : 720p-NEXT , HDTV
Resolution : 720p HD (Zip 4.9GB)
Presented : Variety Myanmar
Variety Myanmar Group >>
(Variety Myanmar Group တွင်လည်း FB Direct link ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် )
Zip File Download >> 4.9GB
Download Village Survival, the Eight2Episodes
MEGA Zip Rar (4.9GB) 720p Download
Zay Khant paing says: